Nhau - Globe vharuvhu mabhenefiti
(1) chimiro chevhavha yepasi rose chiri nyore pane vharuvhu yesuo, uye kugadzira uye kugadzirisa zviri nyore.
(2) yekuisa chisimbiso pamusoro hazvisi nyore kupfeka uye kukwenya, kusimbisa zvakanaka, kuvhura nekuvhara pakati pevhavha yevhavha uye vharafu yekuisa chisimbiso pamusoro isina kuitsvedza, saka kupfeka nekukwasva hazvisi zvakakomba, kusevha kwakanaka kwekuita, hupenyu hwakareba hwebasa.
(3) painovhura nekuvhara, sitiroko sitiroko idiki, saka kukwirira kwevhavha yeglobe idiki pane vharafu yesuo, asi hurefu hwechimiro hwakareba kupfuura vharafu yesuo.
(4) kuvhura nekuvhara torque yakakura, iyo yekuvhura nekuvhara stranding inonetsa, nguva yekuvhura neyokuvhara yakakosha.
(5) kuramba kwemvura kwakakura, nekuti iyo yepakati chiteshi mumuviri wevhavha inotyisa, kuramba kwemvura kwakakura uye kushandiswa kwesimba kwakakura.
(6) apo iyo yekumanikidza kumanikidza Pn munzira yekufamba kwepakati iri shoma kana yakaenzana ne16Mpa, inowanzo yerera, uye iyo yepakati inoyerera ichibva nekwakadzika kudivi revhavha yevhavha; Chezita kumanikidza Pn ≥ 20Mpa, inowanzo shandisa countercurrent, yepakati kuyerera kubva munzira yedhisiki. Kuti uwedzere chisimbiso chinzvimbo. Kana iri kushandiswa, iyo yepakati-yakatemwa vharuvhu yepakati inogona kungoyerera mune imwe nzira uye haigone kuchinja iko kuyerera kwekuyerera.
(7) painovhurika zvizere, dhisiki rinowanzo kukanganiswa.
Iyo axis yevhavha yevhavha yeglobe vharuvhu inoenderana nekuisa chisimbiso pamusoro pechigaro chevhavha. Dzinde rakavhurika / rakapfupika sitiroko ipfupi uye ine yakavimbika kwazvo yekucheka-off chiito, ichiita kuti vharafu iyi ikodzere svikiro yekucheka-kuregedza kana kudzora uye kupwanya kushandiswa.
Nortech ndeimwe yeanotungamira maindasitiri vharuvhu vagadziri muChina ine mhando chitupa ISO9001.
Zvigadzirwa zvikuru: Butterfly Valve, Bhora Valve,Gate Valve, Tarisa Valve, Globe Vavlve,Y-Vanogadzira, Magetsi Acurator , Pneumatic Acurators.